बैंकहरुद्वारा धमाधम नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुन बैंकको कस्तो ? | Kendrabindu Nepal Online News
बैंकहरुद्वारा धमाधम नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुन बैंकको कस्तो ?
१ आश्विन २०७७, बिहीबार १७:३०
यतिबेला वाणिज्य बैंकहरुले धमाधम नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरिरहेका छन् । कृषि विकास बैंकले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ७.२५ र संस्थागततर्फ ६.५० प्रतिशत ब्याज तोकेको छ ।
त्यसैगरी, बचतमा ०.६० देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको बैंकले जनाएको छ । हाल बैंकका १३ प्रकारको बचत खाताहरु सञ्चालनमा छन् । बैंकले कर्जाको ब्याजदर १३.८५ प्रतिशतसम्म तोकेको छ । बैंकले एग्रो प्रडक्ट लोन, फिसिङ फार्मिङ लोन, युवा स्वरोजगार कर्जा, लाइभ स्टक लोन, कोल्डस्टोर कर्जाको ब्याजदर १०.९५ प्रतिशत तोकेको छ । त्यसैगरी, बैंकले हाउस होल्ड, पर्यटन, हायर पर्चेज, होमस्टे सर्भिस लोन, शैक्षिक धितोकर्जा, अटो लोन मोटरेज कर्जाका लागि १३.८५ प्रतिशतसम्म ब्याज तोकेको छ ।
त्यसैगरी, सरकारी स्वामित्वको अर्काे बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले निक्षेपतर्फ मुद्दतीमा ६ प्रतिशतदेखि ७.२५ प्रतिशत तथा संस्थागत ५ प्रतिशतदेखि ६.५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ ।
त्यसैगरी, बैंकले बचत खातामा न्यूनतम ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी, बैंकले कर्जातर्फ घर कर्जामा न्यूनतम ७.३ प्रतिशतदेखि अधिकतम ८.८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । घर कर्जातर्फ ५ वर्षसम्मका लागि ७.३ प्रतिशतदेखि ७.८० प्रतिशतसम्म, १० वर्षका लागि ७.८० प्रतिशतदेखि ८.३ प्रतिशतसम्म र १५ वर्षका लागि ८.३ प्रतिशतदेखि ८.८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकका अनुसार महालक्ष्मी घर कर्जामा १० वर्षका लागि ७.३ प्रतिशतदेखि ७.८ प्रतिशतसम्म तथा १५ वर्षका लागि ७.८ प्रतिशतदेखि ८.३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ । बैंकले सवारी कर्जाको आधार दरमा ३.२५ प्रतिशतसम्म, विद्युतीय सवारी साधन कर्जामा १.५० प्रतिशतसम्म थप ब्याजदर लिन पाउने गरी ब्याजदर तोकेको छ ।
त्यसैगरी, माछापुछ्रे बैंकले मुद्दती निक्षेपमा संस्थागततर्फ ६.५ प्रतिशतदेखि ७.५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । व्यक्तिगततर्फ ७.२५ प्रतिशतदेखि ८.२५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर रहेको छ । बचत खातातर्फ न्यूनतम ३ प्रतिशतदेखि अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर रहेकोे छ । त्यस्तै, बैंकले कर्जाको ब्याजदरमा न्यूनतम १०.६९ प्रतिशतदेखि अधिकतम १३.६९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।
बैंकले कमर्सियल भेहिकल लोन, मोर्टेज लोन, मार्टेज प्लस लोन, होम लोन, अटो लोन, स्यालरी प्याकेज लोन, एमबीएल प्रोफेसनल लोन, एजुकेसन लोन लगायतका शिर्षकमा कर्जा दिँदै आएको छ । त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बचतमा न्यूनतम ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने घोषणा गरेको छ । मुद्दतीखातामा बैंकले व्यक्तिगततर्फ १ लाखसम्मलाई ७.७५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा माथिका मुद्दतीमा ८.२५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । दिने घोषणा गरेको छ । साथै संस्थागत मुद्दतीमा बैंकले ६.५० प्रतिशतदेखि ७.१० प्रतिशतसम्म ब्याज तोकेको छ ।
त्यसैगरी बैंकले न्यूनतम ८.७४ प्रतिशतदेखि अधिकतम १२.४९ प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर तोकेको छ । बैंकले एक वर्षे फिक्स्ड ब्याजदरमा कृषि कर्जा , घर कर्जा एनआइबीएल एसएमई लोन, इको लोन, सेयर धितो कर्जा, सुनचाँदी धितो कर्जा, ९.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, बैंकले ७ वर्षे र १० वर्षे घर कर्जाको क्रमशः १०.५० प्रतिशत र १२.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । सवारी कर्जाको ब्याजदर क्रमशः ११ प्रतिशत र १३ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ ।
त्यसैगरी, मेगा बैंकले बचतमा न्यूनतम ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज सार्वजनिक गरेको छ । मुद्दति खातामा व्यक्तिगततर्फ एक वर्षसम्मलाई ६.७५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा माथिका मुद्दतिमा ८.२५ प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ । संस्थागत मुद्दतितर्फ ६ प्रतिशतदेखि ७.१० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी, बैंकले १०.३ प्रतिशतदेखि अधिकतम १३.३ प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर तोकेको छ । बैंकले अटो लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, टम लोन, लगायतका कर्जाको ब्याजदर १३.३ प्रतिशत तोकेको छ ।
त्यसैगरी, हिमालयन बैंकले मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ४ देखि ७ र संस्थागततर्फ ३ देखि ५.५० प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ । त्यस्तै बचततर्फ न्यूनतम ०.२५ देखि ४ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइनेछ । त्यसैगरी, एनसीसी बैंकले मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ७.२५ र संस्थागत रुपमा ६.५० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । बैंकले १ वर्षभन्दा बढीको व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ८.२५ प्रतिशत ब्याज दिने जनाएको छ ।
त्यस्तै, बैंकले बचततर्फ न्यूनतम ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने जनाएको छ । बैंकले ११.०३ देखि १४.०३ प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर तोकेको छ । बैंकले १३.०३ मा सवारी कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । शैक्षिक धितोकर्जा, सरल कर्जा, सेयर धितोकर्जा, घर कर्जाको ब्याजदर १४.०३ प्रतिशत तोकेको छ । त्यस्तै, एभरेष्ट बैंकले मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ७.२५ र संस्थागतरुपमा ६.५० प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ । बचततर्फ न्यूनतम २.५० देखि ४.५० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको जनाएको छ । त्यस्तै, बैंकले १२.४८ प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर तोकेको छ । बैंकले हाउजिङ, भेहिकल, हायर पर्चेजको कर्जा १२.४८ प्रतिशत तोकेको छ । शैक्षिक धितोकर्जा, एग्रो लोनको ब्याजदर ११.४८ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।
त्यसैगरी, सनराइज बैंकले मद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ७ देखि ७.७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकिएको छ भने संस्थागततर्फ ६.५० देखि ७.३५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । बचततर्फ न्यूनतम १ प्रतिशतदेखि अधिकतम ४.५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले न्यूनतम १०.९५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १३.९५ प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर तोकेको छ । बैंकले ओभरड्राफ्ट, डिमान्ड लोन, एसएमई लोन, टर्म लोन, रियल स्टेट लोन, सनराइज घर कर्जा लगायतका शिर्षकमा कर्जा दिने जनाएको छ ।
त्यसैगरी, एनएमबी बैंकले साधारण बचतमा न्यूनतम २.७५ प्रतिशतदेखि ४.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै, मुद्दतिखातामा व्यक्तिगततर्फ १ वर्ष भन्दा तलकोमा ५.५० प्रतिशत, ६ महिनासम्म ६.५० प्रतिशत तथा एक वर्षभन्दा माथि १५ वर्षसम्मका मुद्दतिमा ७.२५ प्रतिशतदेखि ९.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने जनाएको छ । त्यसैगरी, बैंकले न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि अधिकतम १३.४२ प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर तोकेको छ । बैंकले ५ वर्षे र २ बर्षे फिक्स्ड ब्याजदरमा घर कर्जा ल्याएको छ । जसको ब्याजदर ८.९९ प्रतिशत र १०.७५ प्रतिशत रहेको छ ।
बैंकहरुद्वारा नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक
Prevगौतमले लिए राष्ट्रियसभाको सदस्यमा सपथ
खाना पकाउने सबै ग्यास सिलिण्डरको मूल्य घट्यो, अब २ हजार १ सय कायमNext